Raha ny loharanom-baovao azo antoka, efa maty ny tena rainy fa tsy io raim-pianakaviana izay nanaiky nitoerany herintaona io. Asa koa moa na betsaka ny “zanaka am-pielezana” dia tsy hay nanavaka izany na hain’ilay tovolahy ny tantara taloha. Nilaza ny mpitandro filaminana iray omaly fa efa nalefa any amin’ny fitsarana Miarinarivo ireo telo mihaotra voarohirohy. Ilay mody zokiny lahy izay nilaza ho iray ray tamin’ilay zaza lasibatra sy ny vadiny ary ny rahavavin’ny vadiny niray tsikombakomba no tratra tany Andilamena. Tsiahivina fa nisy fankana an-keriny nitranga ny 24 mey teo tany Soavinandriana Itasy ka zazalahikely 3 taona no nalaina mpivady. Ny 25 mey, nangataka vola 10.000.000 ariary izy ireo. Ny 28 mey 2019 dia nandefa 1.000.000 ariary ny ray aman-drenin’ilay zaza mba nentina ahafantarana ny toerana andraisany vola amin’ny finday. Ka fantatra fa teny Ivandry no toerana misy azy ireo. Ny 3 jona, nisy laharana finday hafa koa niantsoany hangalana vola avy any Andilamena. Nidina avy hatrany tany an-toerana ny polisy nisambotra azy mivady ireo sy nitondra ilay ankizy nalaina an-keriny. Voarohirohy koa ny zandrin’ilay vehivavy. Salama tsy naratra ilay zaza.